COVID-19: Anya ohuru nke atumatu iguzosi ike n'ihe nke usoro ahia | Martech Zone
Coronavirus agbagotela azụmaahịa ma na-amanye azụmahịa ọ bụla ka ha lee okwu ahụ anya ọhụrụ iguzosi ike n'ihe.
Iguzosi Ike n'Ihe Were n'Ọrụ
Tụlee iguzosi ike n'ihe dị ka onye ọrụ ahụ si lee ya anya. Ulo oru itughari ndi oru aka ekpe na aka nri. Ọnụọgụgụ ndị enweghị ọrụ nwere ike karịa 32% n'ihi Coronavirus Factor ma ịrụ ọrụ site n'ụlọ anaghị anabata ụlọ ọrụ ma ọ bụ ọnọdụ ọ bụla. Aychụ ndị ọrụ bụ ihe ngwọta dị mma maka nsogbu akụ na ụba… mana ọ naghị ahụta iguzosi ike n'ihe.
COVID-19 ga-emetụta ihe karịrị nde 25 na akụ na ụba ụwa ga-ata ahụhụ ebe ọ bụla n'etiti ijeri $ 1 na ijeri $ 2.
Òtù Mba Ụwa Na-ahụ Maka Ọrụ
Azụmaahịa ndị na-efu n'ụgwọ n'ihi ọnọdụ kwụ otu ebe na-eche mkpebi siri ike nke ịhapụ ịhapụ ndị ọrụ ma ọ bụ jigide ha na obere ụgwọ ma ọ bụ rụpụta usoro ntụkwasị obi ndị ọzọ. O nwere ike ịbụ ihe dị mfe ịhapụ ndị ọrụ gaa… mana atụla anya ka ndị ọrụ dị ukwuu laghachi ma ọ bụrụ na mgbe azụmahịa gị laghachiri ahụike.
CNBC na-enyocha nke ahụ Ulo oru iri na asaa zuru ụwa ọnụ na-emetụta ọrịa na-aga n'ihu. Ndị ọchụnta ego, ọkachasị ndị obere na ndị pere mpe, enweghị ego buru ibu ma ha kwesiri iji mepụta nke ọma usoro iguzosi ike n'ihe iji hụ na ọ dị ntakịrị nkwụsị. Ọ bụ ezigbo nhazi ọrụ nke ọkachamara iguzosi ike n'ihe gị nwere ike inyere aka tinye ọnụ ma mejuputa ya.
Iguzosi Ike n'Ihe Ndị Ahịa
N'agbanyeghị ọnọdụ dị na mpụga, ndị ahịa na-atụ anya ọrụ pụrụ iche. Ọrịa a nwere ike ịbụ ohere ọla edo maka azụmaahịa gị iji mejuputa usoro ntụkwasị obi ọhụụ na-elekwasị anya na ọrụ na ọmịiko karịa ịre ahịa. Ọ bụrụ na ị naghị ere dị mkpa ngwongwo, ị nwekwara ike ịhapụ ndị ahịa itinye aka na usoro ndị ọzọ - gụnyere ịnye egwuregwu, mmelite kachasị ọhụrụ, ịnye ndụmọdụ na ihe ndị ọzọ. Branddị gị kwesịrị ịdị mkpa, nke bara uru, ma na-aga n'ihu isonye. Ọ bụrụ n’inwee ike, bido ịnabata iwu na ekwentị ma na-ebuga ndị mmadụ ụlọ.
Mgbe azụmaahịa na-adịghị nwayọ, ị gaghị achọ dịkwuo ụgwọ ọrụ. Ma na oge nsogbu ndị a, iwelata ego maka mgbapụta nke isi ihe nwere ike inyere ndị ahịa gị aka kachasị - yana n'azụmaahịa gị mgbe ha mechara mee ka iguzosi ike n'ihe ha dịrị.
Onye ọkachamara na-eguzosi ike n’ihe gị ga-egosi gị otu esi etinye ihe ndị a na ọtụtụ usoro iguzosi ike n’ihe nye ndị ahịa. Ndị ahịa na-enwe ekele maka ichebara echiche.
Ndị na-ere ahịa na ndị ahịa na-ere ahịa
COVID-19 bụ ihe ndọghachi azụ nwa oge mana ọ ka hapụrụ ndị na-ere ahịa na ndị na-ere ahịa na-ejigide ngwongwo karịrị akarị, enweghị ntụgharị, na obere ego iji kwado ọrụ ha.
Dịka ụlọ ọrụ na-ahụ n'anya, ị nwere ike ịhazi atụmatụ ọhụụ nke iguzosi ike n'ihe iji nweta ihu ọma ha n'oge a siri ike. Otu ụzọ bụ ịkwụsị ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ nye usoro ntinye. I nwekwara ike gbalịa ịchọta ụzọ iji nyere ha aka ịkwaga ngwongwo ha na ndị ọrụ njedebe - ikekwe site na nnyefe ụlọ.
Mgbe mkpọchi ahụ kwụsịtụrụ, olee otu ị ga-esi hazie arụmọrụ iji kwụghachi ndị na-akwụsi ike n'akụkụ ha ụgwọ? Oge erugo igosi mmetụta ọmịiko ma tinye ihe mmadụ na-ebute ụzọ nke atụmatụ ọ bụla. Ọ bụ oge ị ga-eji nkwanye ugwu na nkwukọrịta n'etiti ndị na-ere ahịa gị na ndị na-ere ahịa ahịa. Nke a bụ oge iji wusie nkekọ ike, mepụta echiche ọhụrụ maka ọdịnihu, ma kwado ịkwado ọnụ.
Dị nnọọ ka ị na-enyere ndị na-ere ahịa na ndị na-ere ahịa ahịa aka aka, ị ga-achọkwa otu echiche ahụ gị ndị na-ere ahịa. Nkwado ha ga-aba nnukwu uru iji nyere gị aka imezu ngwa ngwa mgbe mkpọchi ahụ mechiri ma ire ere dị umengwụ. Mee ka iguzosi ike n'ihe dịrị gị ma ị nwere ike ịnweta otuto n'aka ndị na-ere gị, na-enyere ego gị aka ma na-enyere azụmahịa gị aka ịlaghachi na ahụike ngwa ngwa.
Buildinglọ ewu ewu na ọrịa ojoo
Wulite aha gị site na ọrụ mmekọrịta gị na ndị ahịa gị adịghị ahazi. Ndị ọchụnta ego nwere ike ịkwado ndị na-enweghị ọrụ, na-enweghị ego, enweghị ebe ha ga-anọ, na nri adịghị.
Ihe omume ndi mmadu nwere ike ime ka i nwee ekele site n'aka ndi emetutara na ihe ozo. Agbanyeghị, ọ nwere ike inwe nnukwu mmetụta na aha ọma gị. Ndị na-ere gị, ndị ahịa gị, yana ndị ọrụ gị, ga-ahụta gị na ụzọ dị iche. Ikwesị ntụkwasị obi ha ga-etokwa.
Post Coronavirus viruswa
Ọrịa ahụ nwere ike ịdata mana nkuzi mkpuchi ga-adịgide na azụmaahịa ga-eche maka ịmaliteghachi usoro mmemme iguzosi ike n'ihe dị iche iche. O yikarịghị ka ndị ahịa na azụmaahịa ga-agbapụta mgbe mkpọchi ahụ kwụsịrị n'ihi na a ka edobeghị anya banyere ọdịnihu akụ na ụba ụwa.
Mee ka onye ọkachamara n’ikwesị ntụkwasị obi ndị ahịa zụlite usoro ọhụụ ga-eme ka ndị mmadụ laghachi azụ iji nọrọ na nhọrọ ịkwụ ụgwọ dị mfe, nweta ụgwọ ọrụ ozugbo na igbu ọrụ. Gba ndị ahịa ume imefu pụtara na ịkwesiri ịnye ndị na - ere ahịa ume na agbamume - na-atụ anya na ha ga-abawanye uru. Site na mfu ndị nwere akụ na ụba na umengwụ ọ ga-esi ike ịme azụmahịa ahụ ngwa ngwa. N'oge ndị a, ndị na-ere ahịa, ndị ahịa, na ndị ọrụ bụ ezigbo akụ gị. Mmemme iguzosi ike n'ihe dịghachi ọhụrụ nwere ike ịkwụ ụgwọ karịa taa… mana ọ ga-akwụ ụgwọ ụgwọ n'ọdịnihu.
Ha na-ekwu nke ahụ ihe niile na-eme nwere ihe kpatara ya. Ọ bụrụ na oria a na-efe efe gbanwere etu anyị si ebi ndụ, otu anyị si emekọrịta, na etu azụmahịa si arụ ọrụ - mgbe ahụ anyị nwere ike ibi na ụwa ka mma. Azụmaahịa gị ga-erite uru n'ọnọdụ a ma mejuputa mmemme iguzosi ike n'ihe kachasị mma maka ọdịnihu anyị. Chee echiche ma mee ngwa ngwa site n'enyemaka nke ọkachamara - ma ị nwere ike ịmalite mmalite.
Tags: COVID-19ezi ndị ahịaahịa iguzosi ike n'ihe ọkachamaransogbu akụ na ụbanjigideEgoiguzosi ike n'ihe